အွန်လိုင်းဂိမ်း တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသနေတုန်း အောက်စလွတ်ခဲ့လို့ ပိတ်ပင်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီး Gamer | Buzzy
အွန်လိုင်းဂိမ်း တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသနေတုန်း အောက်စလွတ်ခဲ့လို့ ပိတ်ပင်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီး Gamer
တမင်တကာလုပ်တာလို့ ဝေဖန်သူတွေ ရှိနေပါတယ်။
အမျိုးသမီး အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားသူတစ်ဦးဟာ သူမရဲ. ဂိမ်းကစားနေမှုကို Twitch ဆိုတဲ့ အွန်လိုင်းကနေ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု ပြုလုပ်ပေးတဲ့ ၇ှိတဲ့ channel ကနေ ထုတ်လွှင့်လေ့ရှိပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ရှေ.ဆက်ပြီးတော့ သူမရဲ. ထုတ်လွှင့်မှုတွေကို ဒီ ချန်နယ်က ခွင့်ပြုပေးတော့မှာမဟုတ်ပဲ သူမကို ပိတ်ပင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူမဟာ အွန်လိုင်းကတိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်နေတုန်း အောက်စလွတ်သွားတဲ့ အနေအထားတွေ ပါဝင်လာလို့ပါ ၊ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ Dark Souls ဆိုတဲ့ အွန်လိုင်း ဗီဒီယိုဂိမ်း ကစားနေပုံတွေကို ထုတ်လွှင့်နေစဉ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၊ သူမရဲ. ကစားနေပုံကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ပရိသတ်ထောင်နဲ့ချီပြီး ရှိနေချိန်မှာ ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ ။
သူမဟာ ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ နေထိုင်ကာ Lea May လို့ အမည်ရှိပြီး ယခင်တုန်းက တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေမှာလည်း အခုလို အောက်စလွတ်တာမျိုးတွေ ခဏခဏ ဖြစ်လေ့ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူမဟာ လူစိတ်ဝင်စားမှုများအောင် တမင်လုပ်တာလို့ ဝေဖန်သူတွေ ရှိနေပါတယ်။